SERASERA, TENY MALAGASY: 15/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 15/02/11
15 Février 2011, 23:01pm
Fivorian’ny Parlemanta Kaontin’ny vita hatreo !
Olona vinitra, miady saina … Izany indray no hita soritra amin’ny endrik’ireo mpikambana ao amin’ny Kongresin’ny Tetezamita eny Tsimbazaza tato ho ato.
Miketrika mafy ary tsy tapaka mivory etsy sy eroa indray ireo mpikamban’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita ao Anosikely. Rehefa tomorina sy nohadihadiana akaiky dia tsapa fa diso fanantenana ny ankamaroany fa mety tsy ho raikitra intsony ilay fivoriana tsy ara-potoana efa nandrandrain’izy ireo fatratra fa hatao ny faramparan’ny volana janoary na ny fiandohan’ity volana diavina ity. Misasaka ihany anefa ity ny febroary, tsy mbola hita manangasanga ny amin’izany, nefa efa natao laza masaka ireo lahadinika hivoriana toy ny hoe : ny fandihihana ireo … (Suivre le lien)
Korontan-dava aty Afrika Mailomailo fa ao raha !
Voaporofo izao fa tsy ny Afrikanina mainty aty atsimon’ny tany efitra Sahara toa an’i Guinée, Cote d’Ivoire, Zimbabwe, RDC, Niger, Nigeria ihany no mikorontan-dava fa dia tafiditra ao anatin’ny valan’ny savorovoro politika koa ireo firenena ao Afrika avaratra, toa an’i Tonizia, Ejipta farany teo dia izao mitady hitatra any Alzeria izao. Rehefa atao indray mijery anefa dia saika firenena miteny frantsay avokoa ny ankamaroany. Mitovitovy foana ny zava-mitranga aty Afrika. Voalohany aloha ny fandrodanana ireo atao hoe mpitondra naharitra teo amin’ny fitondrana, faharoa ireo filoha sokajiana ho mpanao jadona, ary antony fahatelo mampikorontana dia noho ny fifidianana. Izay amin’ny ankapobeny ny zava-misy fa mety misy antony hafa maro be manampy ireo efa voalaza ireo. Ny tena marina koa anefa dia tena misy mampiady mihitsy ny samy Afrikanina ary misy firenena vahiny matanjaka tena manana traikefa henjana amin’izany. Firenena efa zatra nanjaka sy niaina ary nahazo tombontsoa taty Afrika io Firenena io. Mampiasa fikambanana maro samihafa izy mba hiarovany ny tombontsoany sy hampijabahana tsotra izao ireo firenena niseho ho … (Suivre le lien)
Raharaha Madagasikara Ho fantatra anio ny hevitry ny Troïka SADC
Vaovao mikasika ny hanitsiana ilay sori-dalan’i Simao no nanombohan’ny Révérend Ndrianalijohn ny kabariny teny amin’ny Magro Behoririka omaly alatsinainy 14 febroary.
«Izaho koa dia namolavola sori-dalana vaovao ka hasehoko eto amin’ny alarobia izao», hoy izy. Nokianiny kosa ny tenin’i Andry Rajoelina tany Toamasian nilaza fa nanara-dia ny Malagasy ny Egyptianina. Tsy nisy fanonganam-panjakana tany Egypta, hoy ny Rév. Andriamanampy fa ny fidangan’ny vidim-piainana no napitroatra ny vahoaka. Mbola fampitam-baovaon’ny zava-nisy tany Toamasina koa no nentin’ny Depiote Camille Mektoub fa “tsy nahomby ilay perquisition tany Toamasina satria ara-dalàna ny maha mpanangom-bokatra azy”. … (Suivre le lien)
Marc Ravalomanana: Milaza ho tonga eto an-tanindrazana ny sabotsy ho avy izao
Tsy mbola nisy ny fampahafantarana izany fahatongavany izany tamin’ireo mpitondra ny Tetezamita ankehitriny.
«Niantso an-tarobia anay mpitarika rehetra ato amin'ny Ankolafy, ny Filoha Marc Ravalomanana omaly maraina, ka nilaza fa ho tonga eto an-tanindrazana izy ny sabotsy izao amin'ny 11 ora antoandro » hoy Atoa Mamy Rakotoarivelo, nandritra ny fivoriana nataon'ny Ankolafy Telo teny amin'ny Villa la Franchise Ivandry omaly. Nohamafisiny fa, "amin'ny maha mpitarika Ankolafy azy dia, tsy mety raha mijanoana any ivelany ny Filoha Ravalomanana.Tokony handray anjara amin’ny dinika rehetra izay hatao eto an-toerana izy, indrindra ny fanasoniavana ilay soridalana entina, ivoahana amin'ny krizy”.
Raha nanontaniana ny mikasika ny fiarovana an’Atoa Ravalomanana sy ny filaminana amin’ny ankapobeny ity Sekretera Jeneralin’ny antoko Tiako i Madagasikara ity dia, nanambara mazava fa “amin’ny maha Filoham-pirenena efa nitondra an’i Madagasikara azy, nandritra ny fito taona, dia efa nandanjalanja tsara ny … (Suivre le lien)
Rivodoza Bingiza: Olona 5 namoy ny ainy, an'arivony traboina
Marihina fa mbola tarehimarika vonjimaika ireo, izay mbola mety hiova aorian'izao
Nandravarava tamin'ny faritra sasany ilay rivodoza Bingiza. Fantatra fa olona dimy no namoy ny ainy, olona iray tsy hita popoka, ary fianakaviana 5522 no traboina, 2936 tsy manan-kialofana, ireo no tarehimarika vonjimaika navoakan'ny BNGRC na Birao misahana ny fitantanana ny loza voajanahary omaly tolakandro. Tao Mandritsara sy befandriana avaratra no misy ireo namoy ny ainy efatra ary tao Soanierana Ivongo ny iray. Tao Mananara avaratra ny traboina miisa 2586 ary tao Mandritsara sy Befandriana ny 2663, izay tsy manan-kialofana daholo ireto farany. . Fa ankoatr'izany dia maherin'ny 700 ireo trano fonenana rava ary sekoly miisa folo sy tranom-panjakana 9 ihany koa no rava. Marihina fa mbola tarehimarika vonjimaika ireo, izay … (Suivre le lien)
SORI-DALAN’NY DR SIMAO
Tsy mazava na fanatevenana na fandravana Andrimpanjakana
Fisokafana amin’ny fandrafetana ny Andrimpanjakan’ny tetezamita toy ny Kongresin’ny tetezamita (Ct), Filankevitra ambonin’ny tetezamita (Cst), Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Izay no voalazan’ny And. 5 ao amin’ny sori-dalan’ny Dr Simao natolony ireo vondrona na ankolafy politika ny 31 janoary lasa teo, izay fandravonana niainga tamin’ireo tolo-kevitry ny ankolafy politika samihafa. Hafa kosa no voalaza tamin’ny tatitra ho an’ny mpanao gazety ny 3 febroary : fandrafetana na fanendrena mpikambana vaovao indray no hatao amin’ireo Andrimpanjakana ireo.
Inona no tena marina ? Efa niteraka adihevitra rahateo talohan’ny fivoahan’io sori-dalan’ny Dr io ny hoe : fanatevenana ny Andrimpanjakana efa misy no hatao sa fandravana azy vao fananganana vaovao indray ? Eny, na tsy milaza momba izay fandravana izay aza ny fepetra tetezamita ao amin’ny Lalàmpanorenana. Ekena, ny sori-dalana milaza fa fanatevenana ny Andrimpanjakana efa misy no nosoniavin’ireo vondrona politika, ary izay no manankery. Tatitra sy famintinana na fampitam-baovao ihany izay nomena ny mpanao gazety milaza ny hoe famerenana fandrafetana ireo Andrimpanjakana no hatao. Na izany aza, mandeha etsy sy eroa ihany ny … (Suivre le lien)
ANDRY RAJOELINA: "Tsy maintsy vitaina ny fifidianana"
"Tsy maintsy vitaina ny fifidianana rehetra, araka ny tenin’ny mpamatsy vola sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena", hoy ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina, tany Toamasina ny asabotsy lasa teo. Izay te hiverina na te hanakana ny fandrosoan’ny firenena, aleo ho hitan’ny havana eo. "Izay vonona dia miaraka amintsika, mamaritra ny lalana tokony haleha", hoy ihany izy. Ankehitriny, hitantsika ny zava-mitranga any ivelany : nitsoaka, ohatra, ny Filoham-pirenena tany Ejypta, ary nanome fahefana ho an’ny Tafika. Misy ifandraisany amin’izay nitranga teto Madagasikara izany : nitsoaka ny Filoha dia nanome fahefana ny Tafika, fa ny eto Madagasikara nahatsapa hoe iza no tokony homena izany fahefana izany. Aoka tsy hisy hiteny intsony hoe fanonganam-panjakana. Tsapan’izao tontolo izao ankehitriny ny hasin’ny hetsi-bahoaka sy ny fitakiana fanovana.
Nilaza ny Filoha amerikanina fa efa mitsoka any Ejypta ny rivotry ny fiovana. Ny teto Madagasikara, efa tamin’ ny taona 2009 no nitsoka izany ary efa ao anatin’ny fanovana tanteraka. Lasa aloha ihany isika amin’ny fomba fijery sy ny zava-misy rehetra. Ry zareo izao mbola ny hametrahana ny tetezamita, fa isika efa mizotra amin’izany ary mametraka ny fotodrafitrasa. Efa tsara ny fitantanana ankehitriny, ary mbola hataontsika tsaratsara kokoa ny hoavy. Hirotsa-kofidiana ho … (Suivre le lien)